DEG DEG: Shabaab oo ku hanjabay Qaraxyo tankooda culus yahay inay ka fulinayaan Muqdisho | Baahin -News, Sports, Views, Entertainment, War On Terror, Health and Social Affairs
DEG DEG: Shabaab oo ku hanjabay Qaraxyo tankooda culus yahay inay ka fulinayaan Muqdisho
Ururka Al Shabaab oo waayahan kordhiyay awooda qaraxyada ay ka geystaan Magaalada Muqdisho, ayaa ku sii hanjabaya inay fulinayaan qaraxyo kale oo tankooda uu culus yahay oo ay ku waxyeelaynayaan Bulshada Somaliyed.
Sarkaalka Shabaab ugu magacaaban Gobolka Banaadir Cali Maxamed Xuseen (Cali Jabal) ayaa sheegay inay kordhinayaan weerarada ay ka fuliyaan Magaalada Muqdisho.
Wuxuu sheegay muddooyinkii dambe in aad loola yaabanaa awooda qaraxyada Shabaab ay ka geystaan Muqdisho, taasi oo uu sheegay inay la yaabanayeen Saraakiisha dowladda iyo Amisom, balse wuxuu cadeeyay inay sii wadayaan qaraxyada awoodooda culus yihiin ee Muqdisho ay ka fulinayaan.
Cali Jabal ayaanan isweydiin qaraxyada ay ka geystaan Shabaab Muqdisho rayidka ku dhamaanaya, balse wuxuu diirada saaray kaliya xubnaha dowladda ku jira iyo ciidamada Amisom ee jooga Somaliya.
“Runtii waxaan dhihi karnaa, cadowga hadba si kastood u naafeyn karto iyo si kastood ula dagaalami karto ayaad u la dagaalamaysaa, hadii maalintii hore ay ahaayeen qaraxyo intaas ka yar maanta waxa ay marayaan wax ay ka naxsan yihiin oo ay la cajabsan yihiin, intaas iyo kuwa kale oo ka sii xoog badan waan rajeynaynaa, cadowgaas dalka jooga anaga waxaa naga go’an inta ay la eegataba inaan ku weerarno oo aan fara maroojino.” Ayuu yiri Cali Jabal.
Qaraxii ugu dambeeyay ee Shabaab ay ka fuliyeen Hotelka Dayax ee Magaalada Muqdisho, wuxuu ahaa mid aad u culus oo bur buriyay dhismooyin kala duwan oo Hotelka ka agdhawaa, taasi oo muujinaysa awooda iyo baaxada qaraxyada Shabaab.
Tani ayaa fariin waxa ay u tahay Bulshada Somaliyed, maadaama Shabaab aysan shacab iyo dowlad u kala saareyn qaraxyada ay geystaan oo inta badan ay ku dhintaan dad shacab ah oo ka agdhaw goobaha ay qaraxyada ka geystaan Shabaabka.